Antenimieram-panamboarana Pcb - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Pcb Manufacturing And Assembly - PCBFuture
Teny lakile: fivoriambe PCB, fanamboarana sy fivoriambe PCB, fahaiza-manao PCBA
PCBFuture dia manana rafitra fanaraha-maso kalitao matanjaka sy ireo mari-pahaizana rehetra toa ny TS16949, UL, RoHS, CE, ISO, sns .. Ho an'ny PCB, manana Fbe Probe Test sy E-Testing izahay. Ho an'ny PCBA, manana IQC, AOI, Function Test, QA izahay. Ireo dia singa fototra nefa tena ilaina amin'ny indostria PCB.
Amin'ny maha malaza indrindra azy orinasam-pifandraisana elektronika any Sina, dia efa nanolotra vahaolana feno amin'ny famokarana elektronika mandritra ny 10 taona izahay hamaly ny filan'ny tsena sinoa.
Manana mpanjifa avy amin'ny indostria samihafa izahay amin'ny lafiny fahombiazan'ny vidiny, kalitao, fandefasana ary ny zavatra hafa takiana. Avy amin'ny layout PCB mankany amin'ny prototyping PCB, ny famokarana betsaka, ary avy eo ny fivorian'ny PCB, ny serivisy fanangonana boaty elektronika, ny tabilao misy pirinty vita pirinty dia be mpampiasa amin'ny vokatra robotika, fitsaboana, fiara, fifandraisana, vokatra elektronika indostrialy sy mpanjifa.
Mandray anjara amin'ireto orinasa manaraka ireto izahay: PCB malefaka, PCB manokana, PCB prototype, fivoriambe PCB turnkey, fivoriambe PCB elektronika, fivoriambe PCB kely, sns.
Maninona no mifidy ny PCB manufacturing sy ny fivoriambe:
1.Efa marina tsara sy mazava tsara-Ny prototypes dia tsara indrindra ary afaka mifanaraka amin'ny famaritana ny mpanjifa. Izany dia satria ataontsika zava-dehibe ny kalitao sy ny antsipiriany.
2.Fitodihana haingana - takatsika ny lanjan'ny fotoanan'ny mpanjifa. Noho izany, miezaka izahay manamboatra ny prototype amin'ny hafainganam-pandeha mety. Noho izany, ny serivisy fivorian'ny PCB prototype haingana dia afaka mampihena ny fotoana fiandrasanao mandritra ny herinandro vitsivitsy ka hatramin'ny minitra vitsy.
3.Ny vidiny ambany indrindra - manana fomba feno izahay hanampy anao hitazona ny vidiny ambany sy mora. Noho izany, hamita ny tetikasanao amin'ny teti-bola mety izahay.
4. Fanitsiana ny lesoka-Ny prototype PCB-tsika dia tena zava-dehibe tokoa hahitana lesoka, noho izany dia hialana amin'ny tsy fahombiazana lehibe any aoriana. Ny fanafoanana ireo kilema ireo faran'izay haingana dia mety hamonjy anao fotoana sy vola be
5.Fivoriambe pcb haingana-azonao atao ny mangataka prototypes PCB. Mila mandefa ny endrika PCB fotsiny ianao ary mahazo ny valiny.
6. Fanandramana santionany alohan'ny famokarana feno - Avelanay ianao hizaha ny tabilao prototype ary hamafisina raha toa ka ilaina izany.
Fametahana ambonin'ny (SMT)
Hybrid SMT & THT
Fametrahana tokana na roa sosona
Ireo singa mpiorina tsara
BGA sy maro hafa
Fampahalalana ilaina amin'ny PCBA:
Ireto ambany ireto ny lisitry ny fitaovana elektronika sy ny fihinana mifandraika izay ilaina amin'ny fivorian'ny birao vita pirinty:
• Kitapo boribory vita pirinty (PCB)
• Ireo singa elektrika toy ny fanoherana.
• Fitaovana fametahana toy ny tariby, ny preforms, ny bar, ny flx ary ny paste.
• Fitaovana fametahana toy ny milina fandefasana onja, mounter ambonimbony, SMT-Stencil, fitaovana fametahana solosaina ary fitaovana fitsapana sns.
Hatramin'ny niorenan'ny PCBFuture dia niara-niasa tamin'ny orinasa maro izahay tao an-trano sy tany ivelany niaraka tamin'ny hevitra momba ny kalitao voalohany ary ny mpanjifa dia andriamanitra nahatratra laza malaza. Nahazo ny fitokisana sy fanohanan'ny orinasa avy amin'ny firenena 40 mahery izahay miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana, vokatra tsara kalitao ary serivisy tena tsara.